I-MakeOwn.App - I-Mobile App Builder ye-iOS ne-Android
Humusha & Thola Uhlelo Lokusebenza Lwamahhala!
Iwebhusayithi Builder Umakhi wohlelo lokusebenza lweselula
Isivivinyo samahhala Ngena ngemvume
Yenza Izinhlelo Zakho Zeselula ze-
IOS ne-Android ngaphandle kwenkinga!
I-MakeOwn.App iyisakhi se-premium mobile se-DIY app. Isekelwa yi-BuildFire futhi isingathwe kumaseva we-AWS.
Ipulatifomu yethu yokwakha uhlelo lokusebenza isiza amabhizinisi nosomabhizinisi emhlabeni wonke ukwakha
futhi ushicilele izinhlelo zokusebenza eziphumelele, ngaphandle kokubhala umugqa owodwa wekhodi.
Qala Isivivinyo Sezinsuku ezingama-30
Alikho ikhadi lesikweletu elidingekayo
Umakhi wohlelo lokusebenza lweselula
IMakeOwn.App iyindlela esheshayo futhi elula yokwenza izinhlelo zokusebenza zeselula.
Hudula bese udonsa Umakhi wohlelo lokusebenza
Mane uhudule bese uphonsa indlela yakho ngokwakha uhlelo lokusebenza kusuka ekuqaleni, noma wenze ngezifiso esinye sezifanekiso.
Ipulatifomu Enamandla Neguqukayo
Ipulatifomu yethu yokwakha uhlelo lokusebenza inamandla futhi iguquguquka ngokwanele ukukala nawe njengoba ibhizinisi lakho likhula.
Ukuthenga ngaphakathi nohlelo kanye ne-Shopify
Nika amandla izici ze-e-Commerce kuhlelo lwakho lokusebenza bese uqala ukwenza imali ngokuqukethwe kwakho noma umane uthengise imikhiqizo.
Shicilela kalula Ezimakethe
Ukuchofoza okukodwa nje kudinga ukuthi izinhlelo zakho zokusebenza zishicilelwe ku-Apple App Store naku-Google Play Isitolo.
Izinhlelo zokusebenza ezenziwe ngezifiso ngokugcwele
Umakhi wethu wohlelo lokusebenza lweselula we-DIY akuvumela ukuthi wenze ngezifiso kalula zonke izici zohlelo lwakho lokusebenza ngaphandle kokubhala noma iyiphi ikhodi.
Dynamic Push Izaziso
Khulisa ukuzibandakanya nokugcinwa kwezithameli zakho, ngokuthumela imilayezo yesaziso se-smart push.
Funda Kabanzi Ngeplatifomu Yethu
Faka Indawo Yemakethe
Ngeza kalula ukusebenza okunamandla kuhlelo lwakho lokusebenza ngama-plugins.
Indawo yethu yemakethe yesici ifaka phakathi ukusebenza okuhlukahlukene okubandakanya iningi lezidingo zanoma yiluphi uhlelo lokusebenza.
Ngezici ezijwayele ukwenziwa noma ezihlukile, ungathuthukisa i-plugin yakho, noma ake sikuthuthukisele yona.
Isixazululo Se-All-In-One Sokwakha Uhlelo Lokusebenza
Okungenabungozi kanye nokwaneliseka Kuqinisekisiwe
Yakha ngasikhathi sinye kuwo wonke amadivayisi
Guqula amawebhusayithi akho namabhulogi akho abe yizinhlelo zokusebenza
Humusha uhlelo lwakho lokusebenza nganoma yiluphi ulimi
Xhuma nge-Google kanye ne-Facebook Ads
Izifanekiso Zamahhala Ezakhiwe ngaphambilini nezithombe zesitoko
I-App Technology Partner yethu yi-BuildFire
Sisingatha Izinhlelo Kumaseva e-Amazon
Thuthukisa uhlelo lwakho lokusebenza ngeZapier neSegment
Izibonelo Zohlelo Lokusebenza Kwamaselula
Bheka ezinye izinhlelo zokusebenza ezenziwe umakhi wohlelo lwethu lweselula.
Landa Izinhlelo Zethu Zokusebenza
Sinikeza izinhlelo zamabhizinisi nosayizi bonke abangajwayelekile.
Ungazama insiza yethu izinsuku ezingama-30 mahhala, alikho ikhadi lesikweletu elidingekayo futhi uma unquma ukubhalisela kolunye lwezinhlelo zethu,
uzoba nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30.
Ngonyaka I-50% OFF
USD I-GPB EUR
Konke okudingayo ukuze uqale ukwakha uhlelo lwakho lokusebenza.
Izinhlelo zokusebenza ze-Android ne-iOS
Amadivayisi weselula namathebulethi
Ukuhanjiswa kwamahhala kohlelo lokusebenza
Nyusa uhlelo lwakho lokusebenza ngamandla amaningi nangezici.
Nyusa uhlelo lwakho lokusebenza ngamathuba amaningi.
Ingabe uyiNdawo Yokukhosela Izilwane,
noma iqembu le-Pet Rescue?
Ake sisekele umsebenzi wakho! Kungaba wudumo lwethu olukhulu
ukusiza abathandi bezilwane ukwakha izinhlelo zokusebenza mahhala ngokuphelele.
Xhumana nathi ukuze ufunde kabanzi.
Ingabe uyi-Agency noma u-Reseller,
noma unezinhlelo zokusebenza eziningi?
Bhalisela uhlelo lwethu lobambiswano lwe-Reseller futhi uthole izaphulelo zempilo yonke ngazo zonke izinsizakalo zethu ezinikeziwe.
Vakashela Abathengisi ukuze ufunde kabanzi.
Unombuzo? Thola izimpendulo ku Isizinda Solwazi noma uvakashele Isikhungo sosizo se-.
Thola amasu wakamuva wokukhula kohlelo lokusebenza lweselula, izitayela nezibuyekezo.
Kuyini Ukuthuthukiswa Kwekhasi Lomkhiqizo?
I-Apple's Product Page Optimization (PPO) iphakathi kwezici zakamuva ezijabulisayo zonjiniyela bohlelo lokusebenza nabakhangisi. Ngezigidi zezinhlelo zokusebenza ezitholakala ku-App Store, kuya kuba nzima nakakhulu ukuqashelwa. Kungakho ukusebenzisa ukulungiselelwa kwekhasi lomkhiqizo kuzokunikeza umkhawulo phezu kokuncintisana kwakho. Kuyini ukulungiselelwa kwekhasi lomkhiqizo? […]
Ukushabalala Okuthrendayo Kwemidlalo Yeselula kanye Nendlela Yokumiselela
Imvelo yemidlalo yamaselula iyaqhubeka nokushintsha unyaka nonyaka, futhi ukwenziwa kabusha kwegama kwe-Facebook ku-Meta kungenzeka kube nomthelela omkhulu kukusasa lale midlalo. I-Facebook idlale indima enkulu ekusizeni imidlalo yeselula ukuthi idume kwasekuqaleni, kanye nemibono yokuthi kugcizelelwa kanjani okusha ku-3D kanye ne-virtual […]
Kwangathi 25, 2022
Izindlela Ezingu-11 Zokwenza Amavidiyo Aklonyelisiwe Ngemali Engenayo Yangaphakathi nohlelo Akhange Kakhudlwana Kubasebenzisi
Uma ufuna izindlela zokugcina abasebenzisi bematasa ngohlelo lwakho lokusebenza futhi wandise ukugcinwa, izikhangiso eziyividiyo eziklonyelisiwe ziyindlela enhle yokwenza kanjalo. Amavidiyo aklonyelisiwe avumela abasebenzisi ukuthi bathole imiklomelo ethile yangaphakathi nohlelo ngokubuka isikhangiso esiyividiyo emfushane isikhathi esimisiwe. Kuya ngomvuzo kanye nezinhlobo […]
Qasha Uchwepheshe MAHHALA
Uhlelo lokusebenza lwe-e-Commerce
Ukumaketha kohlelo lokusebenza
Izibonelo zohlelo lokusebenza
Bheka ezinye zemikhiqizo yethu yomhlaba wonke:
Imigomo Yokusebenzisa · Inqubomgomo yobumfihlo · ukwaneliseka Isiqinisekiso
© 2022 3DMA Ltd.. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Sisebenzisa amakhukhi kuwebhusayithi yethu ukukunikeza ulwazi olufanele kakhulu ngokukhumbula okuthandayo nokuphinda ukuvakasha. Ngokuchofoza u- "Yamukela Konke", uyavuma ukusetshenziswa kwawo WONKE amakhukhi.